musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Tourism Board Inoramba Yakabatana: Iye zvino muRwanda
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • misangano • nhau • Vadivelu Comedy Rwanda Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Chiitiko cheRwanda Tourism
Sachigaro weAfrican Tourism Board (ATB), VaCuthbert Ncube, vataura pachirairo chakapindwa nemakurukota ezvekushanyirwa kwenyika, vamiriri, nemasachigaro emabhodhi akasiyana siyana anoona nezvekushanyirwa kwenyika pamwe nenyanzvi dzekushanyirwa kwenyika dzinodarika zviuru zvitatu vakapinda musvondo reRwanda Tourism.
Nyika zhinji dzemuAfrica dziri kumuka dzichinzwa nhau dzinoshungurudza dzedzimwe nyika kuvhara nzendo kune dzimwe nyika dzemuAfrica nekuda kwekuwanda kwemhando itsva yeCOVID-19.
Chinodiwa neAfrica ndechekunyatso tarisa zvakadzama uye nekunyatso batanidza kutsunga kwayo uye kuvaka nhaka yayo uye nzira dzekudzoreredza mukati uye pakati pavo vachishandisa kushanya sechikamu chinokonzeresa mukubatanidza kuedza kwenyika dzese kuti dzifambe kupfuura zvinoparadza zvinokonzerwa nekoronavirus uye. misiyano yayo inogara kwenguva refu inoramba ichikura kusvika nhasi chaiye.
Kunyangwe nhau dzakaoma-kurova nekuda kwe new coronavirus musiyano unonzi B.1.1.529, paive nemufaro pachiitiko cheRwanda apo vatungamiri vezvekushanyirwa vakagamuchira rumbidzo mukutenda mumabasa avo mukuedza kudzoreredza indasitiri yekushanya kusvika parizvino.
Yakavambwa muna 2018, iyo African Tourism Board (ATB) isangano rinozivikanwa pasi rose nekuita sechikonzero chekusimudzira kwekufamba uye kushanya kuenda, kubva, uye mukati medunhu reAfrica. Sangano rinopa kurudziro yakabatana, tsvakiridzo ine hungwaru, uye zviitiko zvitsva kunhengo dzayo. Mukubatana nenhengo dzakazvimiririra uye dzeveruzhinji, iyo African Tourism Board inosimudzira kukura kwakasimba, kukosha, uye mhando yekufamba uye kushanya muAfrica. Sangano rinopa hutungamiriri uye kuraira pamunhu uye pamwe chete hwaro kumasangano ayo ari nhengo. Iyo ATB iri kuwedzera pamikana yekushambadzira, hukama neveruzhinji, mari, kushambadzira, kusimudzira, uye kumisikidza niche misika. Kuti uwane rumwe ruzivo, tinya pano.